How To List Your Company On YSX-mm | CB Securities
ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မှု
1. အများပိုင်ကုမ္ပဏီ်ဖြစ်ရမည်။ 3. မတည်ရင်းနှီးငွေ သိန်း ၅၀၀၀ အထက် ရှိရမည်။ 6. ဒါရိုက်တာများသည် လူကြီးလူကောင်းများ ဖြစ်ရမည်။
2. အိတ်ချိန်းတင်သောနေ့တွင် ရှယ်ယာရှင် ၁၀၀ အထက် ရှိရမည်။ 4. ၂ နှစ် အမြတ်အစွန်း ရှိရမည်။ 7. ဒါရိုက်တာများသည် ရိုးသားရမည်။
14. စီးပွားရေး အစီအစဉ်ကောင်း ရှိရမည်။ 5. ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရှိရမည်။ 8. ဒါရိုက်တာများ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ မရှိရ။
10. MFRS/IFRS နှင့် MSA/ISA တို့ကို လိုက်နာရမည်။ 9. ဒါရိုက်တာများ နာမည်ပျက် စာရင်းဝင် မဖြစ်ရ။
11. အခွန်များ ဆောင်ထားရမည်။ 12. သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဈေးကွက်ကို အသိပေးရမည်။
17. အနာဂတ်တွင် အမြတ်အစွန်းထွက်နိုင်ခြေ ရှိရမည်။ 13. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိ ခန့်အပ်ရမည်။
15. အတွင်းသတင်းအသုံးပြု အရောင်းအဝယ်မလုပ်နိုင်ရန် ကာကွယ်ထားရမည်။
16. စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ ကောင်းမွန်ရမည်။
အကယ်၍ သင့်ကုမ္ပဏီသည် YSX ပေါ်တွင်စာရင်းဝင်လိုပါက ပထမဦးစွာ YSX ၏စာရင်းဝင်စံသတ်မှတ်ချက်များ
သင့်ကုမ္ပဏီသည် YSX တွင်စာရင်းဝင်ရန် မည်မျှအဆင်သင့် ဖြစ်နေပါသနည်း။
သင့်ကုမ္ပဏီသည် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ များကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေပါသလား။
သင့်ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင် YSX ၏စာရင်းဝင်စံသတ်မှတ်ချက်များ ကြားတွင် ကွာဟမှုများ ရှိနေပါသလား။
အကယ်၍ ကွာဟမှုရှိနေပါက မည်သို့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ရန် အစီအစဉ်ချထားပါသနည်း။ အစရှိသည်တို့ကို သုံးသပ်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
စာရင်းဝင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရသည့် ကြာချိန်သည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ အဆင်သင့် ဖြစ်မှုအပေါ်တွင် အဓိက မူတည်ပါသည်။
အကယ်၍ ကွာဟမှုနည်းပါးပါက သင့်ကုမ္ပဏီသည် ပြန်လည်ပုံစံချရန် အချိန်များများ မလိုအပ်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်ကုမ္ပဏီသည် အချိန်တိုအတွင်း YSX ပေါ်တွင်စာရင်းဝင် နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိအခြေအနေအကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါက ကျွနု်ပ်တို့ှဆီသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ကျွနု်ပ်တို့ှဆီသို့ လာရောက်၍လည်းကောင်း ကျွနု်ပ်တို့ကို သင့်ကုမ္ပဏီသို့
လျှော်ကန်သောစစ်ဆေးတာဝန်ခံခြင်း နှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ရှယ်ယာတန်ဖိုး သတ်မှတ်ခြင်း
စာရင်းဝင်ရန် လျှောက်ထားခြင်း အလားအလာညွှန်းတမ်း ရေးသားခြင်း
YSX နှင့် SECM သို့ စာရင်းတင်သွင်းခြင်း
ဈေးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေခြင်း
ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုလုံးကို သို့မဟုတ် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ကိုသာစာရင်းဝင်ဖို့ စဉ်းစားရန်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဖွ့ဲစည်းပုံတွင် လိုအပ်သော ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန်။
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များကို စတင်ပြင်ဆင်ရန်။
ကော်ပိုရိတ်၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား လက်ခံကျင့်သုံးရန်။
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ တည်ဆောက်ရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ပြင်ဆင်ခြင်းကို အစပြုရန်။
လိုက်နာထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
လျှော်ကန်သောစစ်ဆေးတာဝန်ခံခြင်း နှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း
လျှော်ကန်သောစစ်ဆေးတာဝန်ခံခြင်း သည် ကုမ္ပဏီအား တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းမပြုမှီ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။
လျှော်ကန်သောစစ်ဆေးတာဝန်ခံခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ထိုလုပ်ငန်း၏ စီးပွားရေးအရ အလားအလာရှိမှု ကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လျှော်ကန်သောစစ်ဆေးတာဝန်ခံခြင်းကို ပြုလုပ်ရန် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းမျာကို ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
( ဥပမာ။ ။ အစိုးရဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သတ်သော အထောက်အထားများ၊ အငှားစာချုပ်များ၊ အာမခံထားရှိထားခြင်းများ၊ စာရင်းစစ်၏ ရီပို့များ၊ အခွန်ဆောင်ထားသည့် အထောက်အထားများ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာတွင် ကမ်းလှမ်းမည့်အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းကို နည်း(၃)နည်း ဖြင့် တွက်ချက်လေ့ရှိပါသည်။
အဆိုပါ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်သည့် အစီရင်ခံစာအား YSX နှင့် SECM တင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Promotion and Book Building
SECM မှခွင့်ပြုချက် ရပြီးနောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် အများပြည်သူသို့ကြော်ငြာခြင်း နှင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Underwriter ကုမ္ပဏီမှ အလားအလာညွှန်းတမ်း(prospectus) နှင့်တကွ မူလရှယ်ယာရှင်များကို (right offering) နှင့် အများပြည်သ တို့ကို (public offering) ဖြင့် အစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းရောင်းချရန်။** တစ်ခုထက်ပိုသော Securities ကုမ္ပဏီများသည် အစုရှယ်ယာကမ်းလှမ်းရောင်းချရန် ပုံမှန် အတိုင်း အုပ်စုဖွဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ဝယ်လိုအားကို စမ်းသပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတစ်ခုကို အတိအကျ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဟုတ်ဘဲ ဈေးနှုန်း အပိုင်းအခြားတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အစုရှယ်ယာဝယ်လိုသူသည် မည်သည့်ဈေးဖြင့်ဝယ်လိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ထို့နောက်တွင် ဝယ်လိုအားအပေါ်မူတည်၍ နောက်ဆုံးအစုရှယ်ယာကမ်းလှမ်းမည့်ဈေးနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
အစုရှယ်ယာ ဝယ်ထားသူများထံသို့ အစုရှယ်ယာခွဲဝေပြီးနောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် YSX သို့စာရင်းဝင်ရန် ကြေညာထားသော နေ့ရက်တွင် စာရင်းဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အလားအလာညွှန်းတမ်း(prospectus) သို့မဟုတ် DDL ရေးဆွဲခြင်း ကို အပြီးသတ်ရန်။
စာရင်းဝင်ရန်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အပြီးသတ်ရန်။ YSX ၏စစ်ဆေးခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အနည်းဆုံး (၇) ပတ်ခန့် ကြာမြင့်တက်ပြီး ကြာမြင့် ချိန်သည် ကုမ္ပဏီ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။
စာရင်းဝင်ရန်စစ်ဆေးခြင်းသည် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ စာရင်းစစ်၊ ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်သူနှင့် လိုအပ်ပါက ကွင်းဆင်း လေ့လာခြင်းတို့မှ တဆင့်လည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
YSX သည် ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းဝင်ရန် သင့်လျော်မှုကို စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှု၊ ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုမ္ပဏီအတွင်းပိုင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အစရှိသည့် စာရင်းဝင်ရန် စံနှုန်း ပြည့်မှီမှု ရှိမရှိ ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်တွင် YSX မှ စာရင်းဝင်ရန်အတည်ပြုခြင်းကို ကြေညာပြီး ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းဝင်မည့်ရက်ကို YSX’s Website တွင် တင်ပေးရန်မည် ဖြစ်သည်။
SECM ကိုလည်း အလားအလာညွှန်းတမ်း(Prospectus) တင်ပြရန်နှင့် ကမ်းလှမ်းမည့်အစုရှယ်ယာများအတွက် အတည်ပြုချက် ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။